‘लकडाउन’ को आठौं दिन, सरकार हामी घरभित्र छौँ, तिमी घर बाहिर कहिले आउँछौं ? - Everest Dainik - News from Nepal
‘लकडाउन’ को आठौं दिन, सरकार हामी घरभित्र छौँ, तिमी घर बाहिर कहिले आउँछौं ?
कोभिड १९ विश्वव्यापी महामारी नेपालमा पनि अरू फैलिने आशंकाले सरकारले लकडाउन गर्यो । अहिले सबै जनता घरभित्र छन् । घरभित्र रहेर सुरक्षित भए पनि धेरैको मन शान्त भएको अवस्था छैन ?
लकडाउनको आठौं दिनमा चामल सकियो । लकडाउनको पूर्वजानकारी नभएकाले खाना पकाउने ग्यास लगायतका खाद्यान्न र सिटामोल लगायतका सामान्य औषधि पनि घरमा छैनन् । लकडाउनको समय लम्बियो ।
बाहिर सबै बन्द छ, गाडी चलेका छैनन् पसल खुलेका छैनन् कतै खुला मिले पनि समानको दर आकाशिएको अवस्था छ सामान कसरी ल्याउने ? एउटा मजदुरले दिनभरि परिश्रम गरेर बेलुकिको छाक टार्दै थिए उनिहरु अहिले कस्तो हालतमा होलान सोच्नु भाको छ सरकार ? आफ्नै परिवारका सदस्य र आफन्त बिरामी परेर अस्पताल लैजानुपर्यो भने कसलाई भनेर लैजाने ? फोन गरेर एम्बुलेन्स आउनेवाला त छैन। आफू बाहिर निस्किन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्छ । त्यहाँसम्म जाने कसरी ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भिड देख्दा भाइरस त्यतै बाट सर्लाकि भन्ने डर छ।
सरकार, तिमीले भनेजस्तो घरभित्र बसेर मात्र मानसिक शान्ति पनि पाएको अवस्था देखिदैन । हामीलाई घरबाट बाहिर निस्किनुपर्यो खाद्यान्न,औषधि लिन, जान कसले लिन आउँछ हामीलाई ? बाहिर निस्कियो भने सुरक्षा कर्मी साथिहरुले लाठी चार्ज गरिरहेको अवस्था छ कसरी जाने, कसलाई खबर गर्ने हामीले ?प्रहरी प्रशासनले कसैलाई चिन्दैन, अस्पताल पुग्न पनि अनुमति दिँदैन ।
अहिले सबैको चिन्ता र सरकारप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको छ झन् । भोकमरी हुन दिन्नौं, औषधि उपचारमा कमी हुन्न, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र भाइरस संक्रमितको जाँचमा कुनै कमी आउँदैन भनेर सरकारले बारम्बार सूचना दिए पनि त्यसलाई मान्न जनता तयार छैनन् । किनकि अहिले सम्म कोरोना संक्रमणको आसन्कामा मृत्यु हुनेको को रिपोर्ट छिटो तयार हुन सकेको अवस्था छैन सरकार भासण ठोकेर मात्र हुँदैन, बोलेका कुरा व्यवहारमा आउनुपर्यो, सरकार ?
हिजो निर्वाचनमा भोट माग्न घरघरमा पुगेजस्तै लक डाउनको अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा जनता बाहिर निस्कन पाउन्नन्, त्यसैले सरकार घरघरमा पुगोस्, जनताको माग यहि छ ।
याे पनि पढ्नुस लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई सडकमै पुसअप
वडाका प्रतिनिधिले घरदैलो मार्फत त भोट माग्न आउँदा प्रत्येकलाई चिनेका होलान् कि ? कि बिर्से अहिले ? वडामा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर । त्यसको जिम्मेवारी वडालाई देऊ । जनताको मानसिक स्थितिलाई शान्त गराउने प्रयास गरेर देखाऊ । बोलेर मात्र पत्याउनेवाला छैनन् अब जनताले ।
साच्चिकै भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार भएको अनुभव कहिले दिन्छौ सरकार ?स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर, जनप्रतिनिधिलाई पुर्ण रुपमा जिम्मेवारी देऊ सरकार । घर घरको समस्या के छ, बुझ्न वडा अध्यक्ष लगायत वडाका प्रतिनिधिलाई परिचालन कहिले गर्छौ सरकार ?
ट्याग्स: कोभिड–१९, लकडाउन